Markab nooca shidaalka qaada oo ku sugnaa Xeebaha dalka Syria oo Gantgaal lagu dhuftay. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Markab nooca shidaalka qaada oo ku sugnaa Xeebaha dalka Syria oo Gantgaal...
Markab nooca shidaalka qaada oo ku sugnaa Xeebaha dalka Syria oo Gantgaal lagu dhuftay.
Kooxaha Dab-damiska ayaa la sheegay inay damiyeen dabka ka kacay Markabka la weeraray. Wakaalladda Wararka Syria faahfaahin kama bixinin halka uu Markabka ka imaanayey.
Wakaalladda Wararka Iran ee TASIMIN waxay beenisay in Markabka la duqeeyey uu ahaa Markab Iiraani. Kooxda La-socodka Xuquuqda Aadanaha ee dalka Syria ee fadhigooda dhexe ku yaallo dalka Britain waxay soo weriyeen in Markabka la weeraray uu ka soo shiraacday dalka Iran
Previous articleQoraal kooban oo lagu baahiyey bogga madaxtooyada Jubbaland oo lagu soo dhoweeyey war-saxaafadeedkii dhawaan kasoo baxay shirkii golaha Midowga Afrika
Next articleMagaalada Hargeysa Somaliland oo saacadihii lasoo dhaafaya ay gaareen wafdi ka socday dowladda Kenya.
Xili uu shir jaraa’id warbaahinta u qabanayay afhayeenka waaxda arrimaha Dibadda Mareykanka Ned price ayaa waxa uu kaga hadlay ismari waaga siyaasadeed ee ka...
War Deg deg ah Dhaq dhaqaayo ciidan oo jska ...